Safarka Mareykanka: Dowladaha ayaa dib u furaya muhiim u noqoshada dhaqaalaha iyo hab-nololeedka musiibada kahor Warka USA
Wararka Diyaaradaha • Wararka garoonka • Wararka Duulista • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Safarka Ganacsiga • Warka Kirada Gawaarida • Arimaha Dowlada • Caafimaadka Warka • Warka Warshadaha Martigelinta • Hoteelada & Dalxiisyada • kale • Dad war samaynaya • dib u dhiska safarka • Qiimeynta dalxiis • Warka Dalxiiska ee Masuulka ah • Wararka Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Wararka Gaadiidka • Wararka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • USA News
Safarka Mareykanka: Dowladaha ayaa dib u furaya muhiim u noqoshada dhaqaalaha ka hor safka iyo nolosha
Bogga ugu weyn » posts » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka Safarka USA » Safarka Mareykanka: Dowladaha ayaa dib u furaya muhiim u noqoshada dhaqaalaha ka hor safka iyo nolosha
Dowladaha dib u furay dib u furistu waa inay garwaaqsadaan inay qasaaro dhanka tartanka ah kala kulmayaan kuwa ganacsiga u furan, iyagoo u baahan dadaal xoog leh oo lagu dhiirigelinayo soo laabashada nabdoon ee ganacsatada iyo tamashlaha labadaba.
Qaadista xayiraadaha COVID ee dhowr ka mid ah gobolada ugu waaweyn Mareykanka ayaa meesha ka saareysa caqabadaha muhiimka ah
Awoodda in si nabadgelyo leh loogu ururiyo ujeeddooyin ganacsi weligood muhiim ugama aheyn dib-u-dhiska dhaqaalaha.
Shirkadaha sii socda ee xaddidaya safarka ganacsiga waxay dib u dhigayaan soo kabashadooda dhaqaale.
Ururka Socdaalka Mareykanka Madaxweynaha iyo madaxa shirkadda Roger Dow ayaa soo saaray bayaankan soo socda:
Qaadista xayiraadaha COVID ee dhowr ka mid ah gobolada ugu waaweyn Mareykanka ayaa meesha ka saareysa caqabadaha hortaagan soo noqoshada dhaqaalaheena musiibada hore iyo nolosheena.
“Dowladaha dib u furay dib-u-furiddu waa inay garwaaqsadaan inay khasaaro ku yihiin kuwa u furan ganacsiga, iyagoo u baahan dadaal xoog leh oo lagu dhiirrigelinayo soo-noqoshada nabadgelyada ee ganacsatada iyo xilliyada firaaqada ah. Sidoo kale, shirkadaha sii wadaya inay xaddidaan safarka ganacsiga iyo ka-qaybgalka shirarka xirfadeed ee shakhsiyadeed iyo dhacdooyinka ayaa dib u dhigaya dib-u-soo-kabashadooda dhaqaale waxayna siin doonaan tartamayaashooda gees.
Kulamada xirfadeed ee qofka iyo dhacdooyinka, kuwaas oo taageera kobaca ganacsiga isla markaana bixiya fursado xiriir-dhisid oo aad u qiimo badan, ayaa ka gaabiyay soo noqoshada sababo la xiriira jahwareer iyo tilmaamo is khilaafsan. Laakiin falanqeyn cusub oo ku saleysan caddeyn oo ka socota saynisyahannada caafimaadka bulshada ee The Jaamacadda Ohio State wuxuu nadiifiyaa wixii hubanti la'aan ah wuxuuna muujinayaa in kulamadan hadda si nabadgelyo ah loo qaban karo.
“Ka soo ifbaxa masiibada, awoodda in si nabadgelyo leh la isugu soo ururiyo ujeeddooyin ganacsi weligood muhiim ma ahan dib-u-dhiska dhaqaalaha. Loo shaqeeyayaasha iyo shaqaaluhuba si isku mid ah ayey uga faa'iideystaan ​​shirarka shaqsi ahaaneed. Waxaan ka codsanayaa hoggaamiyeyaasha ganacisga ee dalka oo dhan inay tixgalin ka helaan khubarada oo ay hoggaamiyaan jidka, iyagoo kalsooni ku qaba, in ganacsiga lagu soo celiyo safarkii ganacsiga iyo ka-qaybgalkii munaasabadaha si xirfadaysan loo maareeyey. ”